DAAWO+AKHRISO: Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka oo markale maantana cadeeyey fashilka Xukuumada ee Amniga dalka. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES) – Mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya oo u socdo kalfadhigoodii 4aad, kiisa 3aad ayay maanta uga doodeen markale doodaha la xariria Amniga dalka, oo ay sheegeen in ay tahay in lagula xisaabtamo, waxaana ilaa maanta hadashay xildhibaano kala duwan oo soo jeediyey aragtiyo kala gedisan.
Dood adag ayay maanta yesheen mudanayaasha baarlamaanka, waxaana doodu intii ay socotay maanta hadlay 13 Mudane baarlamaan, oo si aad ah ugu dhaliilay Xukuumadda Amniga dalka, amrayna in loo baahan yahay in Kheyre looga yeero baarlamaanka hortiisa xildhibaanada ayaa siddan u kala hadlay.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur “ Xaaladda amniga dalka hoos ayuu u dhacday, waxaana gacanta dowladda ka baxay dhul ballaaran oo u gacan galay Alshabaab. Madaxwaynaha Somaaliya saddex jeer ayuu dhar tuute ah gashtay saddexda goorna taliyayaal ayuu xilka ka qaadey, Magaalada Muqdisho maalintii waxaa lagu dilaa 5 qof , taas oo ka dhigan bishii in lagu dilo 150 qof, sanadkiina isku noqonaysa 1,800 oo qof, amni miyaa jira marka”
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig “ Waddankan wuxuu soo maray xilli ay gacanta ku haysay dowalddu Xamarweyne, Madiino iyo Madaxtooyada, inta kalena Alshabaab ayaa haysatay marka laga reebo deegaannada Puntland iyo Somaliland, Airportka Muqdisho waxa uu soo maray iyadoo hoobiyayaashu ku dhici jireen, Jidka Maka Almukaramah marka aan hadda marayo waan farxaa waayo iyadoo xabad wiifto oo keliya ay ordeyso ayaan soo marnay”
Xildhibaan Xidig oo hadalka sii wata ayaa yiri ‘‘Waxaa jirtay xilli xildhibaanadu shan Shan u dhimanayeen. Saaxiibbada waxaan waydiinayaa qof ii tilmaami kara halka Al-shabaab ay si toos ah u joogaan, xagguu joogaa Shabaabka aan leenahay dalku la warergay, xaqiiqda hallaga hadlo; haddii Khayre qarribanyahay, haddii Farmaajo qarribanyahay annagaa ka daran, marka haddaan rabno inaan ragaas la dagaalano aan toos u wajahno ”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow “ Dalka amnigiisu waa inaan laga been sheegin, Dooddaana waa in la joojiyo, qof kasta oo siyaasi ah hammigiisa waa indha ka cabbir, waan ku celinayaa mar kale amniga yaan la siyaasadeynin.”
Xildhibaan Jeesow “ Dalka Qadar ayaan Shabaab ku tilmaameynaa, dhallinyaro Soomaaliyeed ayaa la geeyay dalkaas oo fursad shaqo ka helay, markaas buu xildhibaan Qaran uu ku tilmaamayaa in keliyaha lagala baxayo, waxaas waa ceeb”.
Xildhibaan Sakariye Xasan Cali “ Amni darrada waxaa keeni kara wixii dalku ku burburey oo ah in shaqsigu ka awood bato Sharciga, marka taas oo jirta amni ma jirayo, sidoo kale amni darrada waxaa keenaya cadaalad darrada”.
Xildhibaan Sakariye Xasan Cali “Waa in Raysulwasaaraha loo yeeraa waxna laga waydiiyo qorshahiisa amniga dalka iyo ballan-qaadkiisi 30-ka beri ee amniga.”
Xildhibaan Cali Coosh Cali Xoosh” Doodahan aan leenahay waxay niyad jab ku yihiin shacabka iyo askariga Soomaaliyeed waxayna dhiirragelinaysaa cadowga. “
Xildhibaan Axmed Mayow Ruush “ Isku dayga Dowladdani ee wax ka qabashada amniga uma suuragalin waxayna u muuqataa in marxaladda hadda aan joogno aysan wax isbaddal ah ka samaynin xagga amniga. Aniga aragtideyda qarashkii inooga baxay barnaamijkii xasillinta caasimadda iyo inta ku dhimatay waa ay ka badan yihiin wixii nooga baxay dagaalkii 1977-kii.”
Xildhibaan Axmed Mayow Ruush “ Cabsi ayaan qabnaa, goormuu qarax dhacaa, goorma ayay ciidanku is rasaaseeyaan ayaad ka walwalaysaa, isbaarooyinkii waa kordheen.”
Xildhibaan Ruush “ Janaraallada faragelin xoog leh ayaa lagu haayaa, sidaas laguma shaqayn karo waa in loo madax bannaaneeyaa shaqadiisa si amniga uu wax uga qabto”
Xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed ‘Dhaliilooyin badan iyo wax badan oo la qabtay waa ay jiraan oo waa ay isbarbar socdaan, tan kale marka howlgallada lagu dhawaaqayo waxay u baahan yihiin hannaan mideysan oo gobollada dhan ay u dhan yihiin si cadowga looga guuleysto, Sidoo kale waxaan hirgelin barnaamijkii isku dhafka ciidamada hada ma garanayo meeshii ay ku dambaysay, dhanka kale khilaafkan dowlad gobolleedyada iyo dowladda, waxay caqabad ku tahay amniga dalka. “
Xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed “ shaqsiyan aniga waxaan oranayaa in xukuumadda lala xisaabtamo, wax kasta oo xaaladda dalka la xiriirta wax laga waydiiyo.”
Xildhibaan Sareedo “ Mudane guddoomiye, mudane Xildhibaan; waxaan ku talinayaa in loo yeero janaraalladii hore ee dalka, waxay xal u noqon karaan xaaladda dalka ka jirta, waxaan jeclahay raga garaaddada lagu siiyay garabka in tababar lagu celiyo oo wax la soo baro.”
Xildhibaan Sareedo ” Madaxweyne xildhibaannimada waan isaga tagayaa ama waa inaan meeshaan doono si xornimo ah aan wax uga soo cuni karo xabsigana aan ka baxno”
Xildhibaan Cali Jaamac Jangali ” Dhibaatada ina haysata ee xagga amniga nuucyo badan ayay leedahay, waa mide in wax laga beddelo habka aan kula daaalameyno Al-shabaab, ciidamadii xuduudaha difaaci jirey dalka gudahiisey joogaan, ciidamadii aan iska difaaci jirneyna waxayba joogaan dalka iyagoo annaga na difaacaya. Qofka dadka dilaya waa uun soomaali, tusaale ahaan gabaadhii nagu qarxisey Hotelkii SYL haddii nalaa dhihi lahaa gabadhani waa argagaxiso, waxaan dhihi lahayn maya, haddana waa taa dishey 60 qof oo aan waxba galabsan marka waa inaan beddelnaa qaabka cadowgaas aan ula dagaallamayno”
Xildhibaan Cali Jaamac Jangali ” amni fiican lama helayo ilaa dhaqaale loo helo, 10 sano kahor wixii aan ka hadli jirney ee ahaa xeryahii askartu seexan lahayd baan weli xal loo helin, xaggee lagu arkaa askari jidka wareegaya.”
Xildhibaan Cali Jaamac Jangali “ Xildhibaannada qaar ayaa horey u diiday in la aqriyo qorshaha xukuumadda, maanta dhibaatada ka dhalatay waataas muuqata.”
Xildhibaan Cabdixakiin Macallin ” Anigu runta ayaan dowladda ku taageeraya laakiin markaa been ku ciseeyso iyadaan duminayaa. dhanka kale dowladu wax ma qaban karto hadaanay maamul gobolleedyadu la heshiinin, Dowladdu waxay caburineysaa xuriyadda ra’yiga annaga xildhibaan ahaan ayaan u hadlaynaa mooyee cid ka hadli karta waxa uu aaminsan yahay ma jirto. Xukuumadda hada dalkan ka shaqeysa ma ahan tii aan kalsoonida siiney, maalinwalba wax aan sharci ahayn ayay samaynaysaa.”
Xildhibaan Beenabeene ”Raysul-wasaaraha dadka la xisaabtamayo waa anaga, meeshii laga rabay inuu aqbalo in dib u dhac jiro Wallaahi ma uusan aqbalin taas waa dhibaato. Xukuumaddu waa guul darraysatay amni kama jiro dalkan. Guddoomiye waxaan kaa codsanayaa markaan doodda soo dhammeysanno inaad halkan uga yeerto Raysul wasaaraha dalka si aan su,aallo u waydiinno”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheikh Mursal ayaa sheegay in doodda inteeda ka hartay dib loo dhigey maalinta berito ah. 13 Mudane ayaa hadashay 14 ayaa dhiman. Guddoomiyaha ayaa sheegay in maalinta berito ahi dooddu halkaas ka sii soconeyso haddana uu xiranyahay fadhigu.
Barri waa maalinka saddexaad ee xildhibaannada Golaha Shacabku ay ka doodi doonaan amniga dalka.